Chmod kana maitiro ekugadzirisa mvumo yemafaira edu | Linux Vakapindwa muropa
Chmod kana maitiro ekugadzirisa mvumo yemafaira edu
Joaquin Garcia | | Sisitimu Yekutonga
Muzviitiko zvakawanda, patinenge tichida kuwana faira rakapfuudzwa kwatiri kuburikidza ne USB stick kana Internet, kana patinoda kuwana dhairekitori yemumwe mushandisi, iyo Gnu / Linux kugovera inotipa kukanganisa. Izvi zvinogona kuitika kunyangwe tikanyora rairo nenzira kwayo, chii chimwe, kunyangwe izvi, sisitimu ichatipa meseji ye "isiriyo kuwana" kana "kuwana kwakarambwa"
Chikonzero cheichi ndechekuti mu Gnu / Linux mafaera nemafaira ane mvumo yekugona kushanda navo. Iyi mvumo ine chekuita nekushandurwa, kubviswa uye kugadzirwa kwavo.
1 Chii chiri mvumo yefaira?
2 Ndeapi mvumo yatinogona kuisa mukati meGnu / Linux?
3 Kana akasiyana ari manhamba
4 Console modhi
5 Graphics maitiro
6 Matambudziko emvumo?
Chii chiri mvumo yefaira?
Pane zvese zvinogoverwa zveGnu / Linux Kune maviri marudzi evashandisi, kunyanya, maneja kana mudzi uye nevamwe vese vashandisi. Mutungamiri anokwanisa kuwana mafaera ese ehurongwa hwekushandisa, anogona kudzima, kugadzira uye kugadzirisa chero faira.
Izvo zvakasara zve vashandisi vanogona chete kudzima, kugadzirisa kana kugadzira avo mafaera, mafaera ari mukati memba yako. Mafaira eSystem uye mafaera evamwe vashandisi anogona kungodzimwa, kuchinjwa kana kugadzirwa nemvumo yemutungamiriri kana mushandisi akanganiswa.
Ndeapi mvumo yatinogona kuisa mukati meGnu / Linux?
Yese faira yeGnu / Linux ine mapoka matatu emvumo, iro boka rekutanga rinotiudza izvo zvinogona kuitwa nemuridzi wefaira racho. Boka rechipiri rinotiudza zvibvumirano zvese zvinoshandiswa nevashandisi veboka iro boka rechitatu rinoratidza mvumo iyo vamwe vashandisi vanayo.
Aya mapoka emvumo akakosha sezvo achitambwa nawo uye inotibvumidza isu kupa chengetedzo uye mashandiro kune yedu yekushandisa system.
Nekudaro, isu tinogona kugadzira mamwe mafaera anogona kungoverengwa kana kushandurwa isu pachedu, isu tinogona kugadzira dhairekitori rinotarisirwa neboka revashandisi vari vebazi kana isu tinogona kuita mamwe mafaera anotarisirwa nevose uye izvi zviri mukati medandemutande rakakura zvinobvumidza kugadzirisa kweese mashandiro ekugovana mafaira akati wandei.
Kune rimwe nerimwe remapoka matatu aya tinogona kushandisa kana kuratidza zvinotevera zvinotaurira mashandiro kana zvichigona kugadziriswa, kubviswa kana kunyorwa. Misiyano ndeiyi:
R: Kana tsamba iyi ikaonekwa, inoratidza kuti iyo faira inogona kuverengwa.
W: Kana tsamba iyi ikaonekwa, inoratidza kuti inogona kunyorwa kana kushandurwa.
X: Kana tsamba iyi ikaonekwa, inoratidza kuti inogona kuitwa
Kana akasiyana ari manhamba
Mavara ari pamusoro o akasiyana anogona kushandurwa nenhamba 0 kusvika 7. Nekudaro, iyo nhamba 0 inoratidza kuti hatina mvumo pane iro faira uye iyo nhamba 7 inoratidza kuti isu tine mvumo yese yeiyo faira. Hukama hwehuwandu hwasara nenhamba yadzo ndeinotevera:
7 Mvumo dzose.
6 Kuverenga uye kunyora
5 Kuverenga uye kuuraya
4 Verenga chete
3 Kunyora nekuuraya
2 Kunyora chete
1 Kuuraya chete
0 Hapana mvumo
Zvino zvatava kuziva misiyano yekuisa kune mafaera uye zvinorehwa nemhando imwe neimwe yefaira, tichaishandisa kumafaira edu uye nekuparadzirwa kwedu kweGnu / Linux.
Kugona kuisa imwe mvumo kune faira kana dhairekita kuburikidza neiyo terminal kana koni iri nyore kwazvo. Ini pachangu ndinofarira kushandisa nzira iyi pamusoro peiyo graphical nzira asi nzira mbiri dzinoshanda zvakakwana.
Kuisa kana gadzirisa mvumo yatinofanira kushandisa rairo "chmod". Kana isu tiine iyo faira, ingoshandisa iyo chmod yekuraira. Kana isu tisiri varidzi saka tinofanirwa kutanga tashandisa iyo "sudo" yekuraira.
Mushure mekukumbira chmod yekuraira isu tinofanirwa kuratidza tsamba kana nhamba yekuisa uye iyo faira kana dhairekitori kwatinoda kuisa shanduko mumvumo dzayo. Pakati pechmod raira uye musiyano isu tinoshandisa iyo "+" chiratidzo kana tichida kuwedzera izvo mvumo kana iyo "-" chiratidzo kana tichida kuzvibvisa.
Kuratidza mvumo yefaira isu tinofanirwa kushandisa rairo "ls -l". Mushure mekuzviita, runyorwa rwemafaira ruchaonekwa neakateerana tsamba seanotevera:
Tsamba yekutanga inotitaurira kana iri faira (-), dhairekitori (d), yakakosha block faira (b) kana yakasarudzika hunhu faira (c). Tsamba nhatu dzinotevera dzinotiudza nezvezvibvumirano zvemuridzi, dzimwe tsamba nhatu dzinotiudza nezvezvibvumirano zveGroup uye dzimwe tsamba dzese dzinotiudza nezvezvibvumirano zvevamwe vashandisi.. Kana paine “-” zvinoreva kuti hauna mvumo iyoyo. Ndokunge, kana iine chete "rx" zvinoreva kuti yakaverenga nekuita mvumo asi isina mvumo yekunyora.
Kuti tishandure mvumo yefaira graphically, isu tinofanirwa kutanga taenda kumaneja maneja wedu. Mukati mefairaja maneja isu tinofanirwa kusarudza iyo faira iyo yatinoda kugadzirisa ayo mvumo uye tinodzvanya nekona bhatani remakonzo. Mukati memenyu inoonekwa, tinosarudza iyo Properties sarudzo. Ipapo hwindo senge rinotevera richaonekwa:
Mukati mehwindo iri tinoenda ku "Mvumo" tebhu uye tichaona ese marudzi emvumo iyo iyo faira inayo. Kutenda kudonhedza tinogona kugadzirisa sarudzo uye kuita kuti vamwe vawane mukana we "kuverenga nekunyora" kana hapana. Zvakare, pakupedzisira, sarudzo ye "bvumira iyo faira kuti iite sechirongwa" inoonekwa. Nekuimaka isu tichava kuita kuti desktop izive iyo faira sefaira rinogoneka. Mushure mekusiya shanduko dzatinoda kuita, tinodzvanya bhatani rekuvhara uye shanduko dzakaitwa dzinozoiswa.
Zvinogona kunge isu tichida kushandura mvumo yefaira remumwe mushandisi kana mafaera ari emurairidzi. Mune ino kesi isu tinofanirwa run file maneja semaneja.
Kuti tiite izvi tinovhura iyo terminal uye tinyore:
sudo “nombre del gestor de archivos”
Iwindo rinovhura nemaneja maneja uyo anotibvumidza isu kuita chero shanduko kumvumo mvumo yefaira. Shanduko iyi inogona kuitwa nenzira yapfuura sezvo isu tichizoshandisa shanduko semubati uye kwete semushandisi.
Tinofanira kurangarira kuti shanduko idzi dzatinoita mumvumo yemafaira zvinogadzirwa nemaonero emushandisi. Ndokunge, kugovera kwedu kunonzwisisa kuti izvo mvumo dzinoitwa nemushandisi anoita shanduko, asi kwete nevamwe vese vashandisi. Kana isu tine vazhinji vashandisi, izvo mvumo hazvishande kune avo vashandisi kunze kwekunge isu tichizviratidza.
Izvo zvakakosha kuti uzvizive uye zvakare inogona kuiswa kune ese Gnu / Linux migove, zvisinei zita rekuparadzira. Kuisa shanduko uye mvumo kune mafaera muGnu / Linux zviri nyore kwazvo uye zvakare zvakakosha zvakanyanya sezvo chikamu chekuchengetedzeka kwesisitimu yedu yekushandisa yakavakirwa pane izvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Chmod kana maitiro ekugadzirisa mvumo yemafaira edu
Adhamu Isaías Aguilar Ramírez akadaro
Izvo zvinongondiudza kuti ini handigone kugadzirisa nekuti handisi muridzi.
Pindura Adán Isaías Aguilar Ramírez
Ndine akawanda akaomarara madhiraivha ane mafaera, asi Linux Mint haindibvumidze ini kuteedzera mafaera kubva kune mumwe achienda kune mumwe
Chengetedzo haina basa kwandiri nekuti ini ndinongoshandisa ma disks aya, ndingaite sei kuti ndipe mvumo kune ese kuitira kuti ndirege kuve nematambudziko kutevedzera mafaera?
Ndakaverenga nezve "chmod 777" asi pandinoisa rairo muoni inondiudza kuti ndiri kushaya opareta
Mumwe munhu angandipa syntax yakapusa here?
Pindura kuna Emerson
Bluecherry: software yekuongorora ye IP kamera
4 yakavhurika sosi mapuratifomu eBig data